Ama-Amazons Lord weRings Series Athola Usuku Lokuqala - Isiko Lopop
Ama-Amazons Lord weRings Series Athola Usuku Lokuqala
Okubiza kakhulu Inkosi Yezindandatho series ezosakazwa ku-Prime Video inosuku lokuqala olusemthethweni. Kuya ngokuthi ufunda nini lokhu okude kakhulu kuzofanela ukuthi ulinde izinyanga eziyi-13 ncamashi.
Okunhlobonhlobo ibika ukuthi lezi zinhlelo ezilindelwe kakhulu zizotholakala kusukela ngoSepthemba 2, 2022. Kulandela lolo suku iziqephu ezintsha zizokhishwa masonto onke.
Ukuqopha le midlalo isizini yokuqala kubikwa ukuthi kusongwe eNew Zealand ngoMsombuluko. Futhi isithombe esisemthethweni, esibheka emuva emibikweni yezinhlelo zesabelomali esikhulu ebesivele sishiwo, sakhishwa:
ungenza kanjani amaqebelengwane anomswakama owengeziwe
Akukho okuningi okwaziwayo ngesakhiwo ngalesi sikhathi.
Umbukiso awunaso ngisho nesihloko esisemthethweni okwamanje.
bekuzokwenzekani uma ukuhlanzwa bekungokoqobo
Okwaziwayo ukuthi izobekwa ngesikhathi seNkathi Yesibili. Lokho izinkulungwane zeminyaka ngaphambi kwezincwadi futhi IHobbit. Iphinde ilandele i-ensemble castt enezinhlamvu ezintsha nezaziwayo. Okunhlobonhlobo ubhala ukuthi laba balingiswa bazolandelwa njengoba bebhekene nokuvela kabusha okubi okwesabekayo osekuseni emhlabeni.
Uhambo luqala ngoSepthemba 2, 2022 ngokukhonjiswa kokuqala kwethu Inkosi Yezindandatho ochungechungeni lwePrime Video, kusho iNhloko yama-Amazon Studios, uJennifer Salke, esitatimendeni. Angikwazi ukuveza ngokwanele ukuthi sonke sijabule kangakanani ukuthatha izethameli zethu zomhlaba wonke ohambweni olusha noludumile emhlabeni ophakathi nendawo! Abakhiqizi bethu abanethalente, abalingisi, abenzi bokudala, kanye nabakhiqizi basebenze ngokuzikhandla eNew Zealand ukuletha lo mbono ongachazeki nowesabekayo empilweni.
mars m & m amakhukhi iresiphi
Uchungechunge lwabikwa okokuqala njengolusemsebenzini ngoNovemba 2017. Ngokushesha ngemuva kwalokho kwamenyezelwa ukuthi i-Amazon izibophezela ezinkathini eziningi. Imibiko yokuqala yabikezela ukuthi i-Amazon izofaka isigidigidi samaRandi kulolu chungechunge (hhayi i-typo). Ngasekuqaleni konyaka kwabikwa isizini yokuqala izobiza u- $ 465 million.
Noma kunjalo ayikho ingcindezi yokuba muhle.
uChris tucker wakhokhelwa malini ngehora lokujaha
izinkanyezi zezinkanyezi ukukhuphuka kokulandela ngomkhondo ibhokisi le-skywalker
ujay z nendlu ka-beyonce ngaphakathi
iresiphi emhlophe yekhekhe lomshado kusukela ekuqaleni